….त्यसपछि श्रीमानमार्फत् जन्मिने सन्तान झन नराम्रा हुने डरले पूर्व प्रेमीसँग सहवास! जन्मिए तीन यस्ता सन्तान – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/….त्यसपछि श्रीमानमार्फत् जन्मिने सन्तान झन नराम्रा हुने डरले पूर्व प्रेमीसँग सहवास! जन्मिए तीन यस्ता सन्तान
सन्सारमा अनौठा घटनाहरु भै रहन्छन् । यस्तै एक अनौठो घटना बाहिर आएको छ, जुन सुन्दा हास्यास्पद लाग्छ तर यो सत्य हो । घटना भने अफ्रिकी मुलुक घानाको हो ।
त्यहाँ एक युवतीले आफ्ना प्रेमीलाई छोडेर अर्कैसँग बिहे गरिन् । पछि उनलाई महसुस भयो उनका पति त प्रेमी भन्दा कुरुप रहेछन् । त्यसपछि ‘कुरूप’ श्रीमानमार्फत् जन्मिने सन्तान झन नराम्रा हुने डरले घानाकी ती महिलाले आफ्ना ‘निकै सुन्दर’ पूर्वप्रेमीमार्फत् तीन सन्तान जन्माएकी छिन् ।
नोट : khabar samachar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।